Linux for Doomies I. Inona no atao hoe GNU / Linux sy rindrambaiko maimaimpoana? nohavaozina. | Avy amin'ny Linux
Nano | | GNU / Linux, hafa, soso-kevitra
Ao aminy irery ny titre «Inona GNU / Linux ary rindrambaiko maimaimpoana?»Tsy mazava be ve? Tsy haiko, heverina fa anio, ao anatin'ny oniversite rehetra izay nampianarana ny asan'ny injenieran'ny informatika na ny rafitra no tokony hitondrana an'io hevitra io, fa ... Tena fantatrao ve izany? GNU / Linux ary ny free software? Sa mieritreritra fotsiny ianao fa rafitra maimaim-poana izay tsy azonao ampiasaina Microsoft Office, milalao ary inona izany ho an'ny olona mahalala? Tadidio fa izy ireo, amin'ny maha mpianatr'ireo asa ireo, dia (na tokony) ireo mahalala; ary milaza izany avy amin'ny zavatra niainako manokana aho.
Eny, enyInona GNU / Linux? manomboka.
Amin'ny ankapobeny dia ny firaisana amin'ny Kernel sy ny rafitra miasa (programa) izay miara-miasa hanome fahafaha-miasa; izay tsy mampiavaka azy amin'ny rafitra fiasa hafa.
Ny mahasamihafa azy amin'ny rafitra fiasa hafa dia ny fahafahany, miankina amin'ny fahalalahana fototra efatra an'ny rindrambaiko izy io, izay lasa ny famaritana ny rindrambaiko maimaimpoana:
0: fahalalahana hampiasa ilay programa na inona na inona tanjona.
1: fahalalahana handalina ny kaodin'ny programa ary hanova azy mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
2: fahalalahana hizara indray ny programa.
3: Fahafahana manatsara ny programa ary manao ampahibemaso ny fanatsarana mba hahazoan'ny tsirairay tombony.
Izany no mahatonga GNU / Linux, ny fahalalahana hanao izay tiana atao amin'izany. Saingy ny fahalalahana ihany dia tsy ireo fahalalahana fototra efatra voalaza ihany, na dia misy ifandraisany amin'ireo fitsipika fototra ireo aza, ny mampiavaka ity tontolo iainana ity dia noho io fahalalahana io, misy vondrom-piarahamonina goavambe iray, ary misaotra an'ity vondron'olona goavambe ity. mamorona ny filàna hitombo, ny filàna maniry dia mampisy ny filàna hianatra, ary izay ianarana dia mamoa ary ny vokatra dia alain'ny tsirairay satria an'ny tsirairay.
Mety ho toa utopia na kominisma ity, saingy tsy misy lavitra ny marina noho izany. Raha ny marina, ny fahalalahana ananantsika dia miteraka andraikitra lehibe ary afaka miteraka sakana, ny iray amin'izy ireo dia ny marika maro an'isa; «Ny fahalalahana be loatra dia mitodika any amin'ny fahalotoam-pitondrantena, avy eo ny tsy fahaizakan-tena«. Ary marina izany, anarchisma ao GNU / Linux Izy io dia azo soloina ho fikorontanana, satria raha ny teoria dia satria rafitra manandrana manohitra ireo rafitra efa napetraka dia anarchisma ... fa ny mamela ireo fifanoherana dia manjary manimba tetik'asa maro satria misy ny zavatra mety hitranga raha tsy izany Raha manana filaminana sy fanohanana farafaharatsiny ianao, ny zava-drehetra dia mety hiafara amin'ny fitarihana zavatra toy ny faran'ny tetikasa na ny tsy fetezana.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny Free Software?
Fanontaniana izay apetrany matetika amiko, ny tombony amin'ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana, na ny marimarina kokoa, GNU / Linux. Ankoatra ny fahalalahana omeny anao dia manana tombony ara-teknika mahaliana ihany koa ianao, toy ny «tsy misy viriosy ho an'ny linux»Tombony azo antoka fa na dia tsy voatery ho tena izy aza. Ny virus toy izany dia tsy misy ao Linux satria manana rafitra fiarovana matanjaka somary matanjaka izay manakana an'ity karazana rindrambaiko tsy hivoaka ity isika nefa tsy fantatsika voalohany, fa izany dia olana lalina kokoa izay tsy tonga amin'ny teboka, ahoana raha ny misolelaka dia, na dia virus amin'ny solosaina toy izany ao GNU / Linux, raha misy ny loza satria tsy misy rindrambaiko tonga lafatra sy tsy azo idirana, raha ny marina dia ny elanelana marefo indrindra amin'ny solosaina misy GNU / Linux ary ny rafitra rehetra mety ho mpitety tranonkala, fa raha fintino, Linux azo antoka kokoa io ary tsy voatery satria tsy dia ampiasaina loatra.
Tombony iray hafa ihany koa ny karazany sy ny mety hisafidianana katalaogin'ny rindrambaiko somary malalaka, satria misy be dia be ny azo isafidianana, manomboka amin'ny programa birao ka hatramin'ny programa izay manampy anao handamina ny fotoanao, ampifanaraho ireo kalandrieo, tazomy ireo naoty, Asa, fanamarinana mail, katalaogy lehibe hisafidianana.
Raha ny marina, ny tombony lehibe indrindra amin'ny GNU / Linux amin'ny fomba fijeriko dia ny safidy. Mazava ho azy fa tsy ny rafitra rehetra GNU / Linux Izy ireo dia rindrambaiko maimaim-poana 100% satria mampiditra rindrambaiko tompona amin'ny fiasan'ny fitaovana sasany izy ireo, ny tiana holazaina dia hoe raha te hampiasa rafitra maimaimpoana tanteraka ianao dia afaka manana izany ary raha tsy izany dia tsy hanao izany ianao, rehefa mifidy rafitra GNU / Linux miaraka amin'ireo mpamily tompona tsy voatery hijanona ho afaka ianao.
Hevitra lehibe iray hafa izay miteraka fikorontanana matetika ... Rindrambaiko malalaka sy misokatra (Loharano misokatra).
Fisaka sy amin'ny zava-drehetra, tsy mitovy izy ireo.
El free software miaro ny fahalalahan'ny mpampiasa sy ny rindrambaiko hampiasaina, hanovana, hizara indray ary hanatsara, tsy ahazoana tombony rehetra satria tsy mamela anao hivarotra kaody ny fahalalahana efatra ...
Amin'ny lafiny iray, ny Open Source Hetsika samy hafa tanteraka izy io, saingy mifangaro; tsy fahita firy ary azo faritana ho «miaraka fa tsy mifangaro«. izy loharano misokatra Raha ny marina dia tsy voatery fehezin'ny fahalalahana fototra efatra izy io, loharano misokatra fotsiny, hita maso, izay mamela azy hianatra, fa tsy ovaina, alain-tahaka na zaraina indray. Raha ny marina dia mety ho programa amidy ity fa rehefa mividy azy ianao dia mahazo fidirana amin'ny kaody ihany, fa mbola fananan'ny hafa ihany.
Ka izy loharano misokatra ratsy izany?
Mazava ho azy fa tsy, programa marobe loharano misokatra Maimaimpoana izy ireo ary misy dikanteny natiora ho an'ny LinuxFomba fiasa ara-barotra tsotra izao ankoatry ny rindrambaiko maimaimpoana, izay tsy hoe tsy mahasoa akory, fa tsy mifototra amin'ny foto-kevitra mitovy.
Ny ohatra iray tonga lafatra ohatra dia mety ho an'ny programa izay mitazona kaontin'ny orinasa.
Ny programa ambany free software: mamela anao ho tompon'ny orinasa hahazo maimaimpoana ny programa sy hanana fidirana feno amin'izany, saingy mila olona mamorona azy ianao ary manome izany vola izany ho an'ny mpamorona, izay manao fangatahana. Avy eo ianao dia te-hanitatra azy satria tsy nahomby izy io, miantso ireo mpamorona ianao, izay mandray ny asa efa vita ary manitatra azy. Ary raha amin'izany dia tsy afaka miverina amin'ireo mpamorona ireo ianao, na inona na inona antony, misy mpamorona hafa afaka mandray ilay asa.
Ny programa eo ambanin'ny filozofia loharano misokatra: amin'ny maha tompony anao, ahafahanao mahazo antoka fa madio amin'ny tetika sy tetika ny kaody, tsy enjehina ianao ary tsy misy olona maneso anao. Amin'ny maha developer anao, ahafahanao manana ny kaody sy mivarotra izany amin'ny olona betsaka, na dia midika aza izany fa tsy ny olon-drehetra no afaka manova io kaody io, izay miantoka ny asa ho avy na, ny tenanao, azonao atao ny milaza fa afaka manova ilay kaody ihany koa ianao fa tsy mizara izany indray. ; ny hevitra momba ny fahalalahana dia somary miolakolaka kokoa, saingy tsy isalasalana fa mihoatra ny avelan'ny maro.
Mazava ho azy, misy fiantraikany hafa toa ny, ohatra, milalao maloto izy ireo ary tsy mampiseho anao ny kaody sy izay rehetra mety hitranga mifandraika amin'izany, fa efa etika kokoa noho ny zavatra hafa rehetra izany.
NO! angamba ny hadisoan'ny zazavavikely (anisan'izany ny tenako) dia (na) mino fa ny fahalalahana dia midika hoe afaka. Na izaho na ny olona izay efa eto amin'ity tontolo ity dia tsy reraka milaza fa tsy voatery hitovy ny malalaka sy ny afaka; Zavatra iray ny hoe afaka zavatra iray ary afaka, noho izany, maimaim-poana nefa tsy voatery ho afaka. Ohatra? Google… Maimaimpoana ary maimaim-poana ampiasaina izany. Sa izany free software? na oviana na oviana, satria na dia tsy mandoa vola hampiasana ny teknolojian'izy ireo aza ianao dia mandoa amin'ny mombamomba anao manokana ary tsy manana ny fahalalahana fototra amin'ilay rindrambaiko.
Raha ny marina, misy programa rindrambaiko maimaimpoana amidy amin'ny vidiny ary avelao ianao hanao izay tianao hatao, misy maodely fandraharahana rindrambaiko maimaimpoana tena mahomby toa an'i Red Hat ary tsena marobe ahitanao sy hivoatra eto amin'ity tontolo ity , angamba ny zavatra tsy mampino momba ny rindrambaiko maimaimpoana sy ny GNU / Linux (na ny BSD koa) dia ny fetra tokana ampanaovinay amin'ny tenantsika ihany.
Ary ity, ry tompokolahy, no tapany voalohany amin'ilay tiako hatolotra ahy, tonga ny anjaranao ... Tsy hita ve izany? Miantra ve? Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Linux for Doomies I. Inona ny GNU / Linux sy rindrambaiko maimaimpoana? nohavaozina.
fampidirana tsara Nano. lahatsoratra mazava sy mazava tsara.
Heveriko fa tsy manatona tsara ny lohahevitra ianao. Ny rafitra GNU / Linux dia tsy ny rindrambaiko maimaimpoana rehetra 100% (raha ny marina ny ankamaroany dia tsy).
Ankoatr'izay, ny famaritana ofisialy ny loharano misokatra (ny an'ny OSI) dia misy rindrambaiko maimaimpoana (araka ny famaritan'ny FSF). Raha atao teny hafa, ny rindrambaiko maimaimpoana rehetra dia loharano misokatra fa tsy ny loharano misokatra rehetra dia rindrambaiko maimaimpoana (araky ny FSF).
Afaka mivarotra rindrambaiko maimaim-poana ianao, tsy misakana anao ny fahazoan-dàlana GPL (namidy ny mpanangona azy i Stallman taona lasa izay).
Manoro hevitra anao aho hamaky ity boky nosoratan'i Stallman ity: http://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/softlibre/
Ary vakio ity: http://www.opensource.org/docs/osd
Tsia, tsy nifantoka tamin'izany aho ary io no tena hohajaiko ankehitriny rehefa manavao ilay lahatsoratra aho.
Heveriko fa raha nanazava aho fa ny rindrambaiko maimaim-poana dia midika fa loharano misokatra izy io ary tsy voatery ho rindrambaiko maimaimpoana io loharano misokatra io.
Ny mampiavaka azy amin'ny rafitra fiasa hafa dia ny fahafahany, miankina amin'ny fahalalahana fototra efatra an'ny rindrambaiko izy io
Midika izany ianao fa rindrambaiko maimaimpoana ny GNU / Linux (na azoko tsara izany). Tsy marina izany. Ny fizarana rindrambaiko "tsy maimaim-poana" 100% dia isaina amin'ny rantsantanantsika.
Fisaka sy amin'ny zava-drehetra dia tsy mitovy izy ireo.
Ny rindrambaiko maimaimpoana dia miaro ny fahafahan'ny mpampiasa sy ny rindrambaiko hampiasaina, hanovana, hizara indray ary hanatsara azy rehetra, tsy misy tombom-barotra, satria ny fahalalahana efatra dia tsy mamela anao hivarotra kaody ...
Etsy ankilany, ny Open Source dia hetsika hafa tanteraka, fa ny iray kosa mifangaro; tsy fahita firy izy io ary azo faritana ho "miaraka, fa tsy mikorontana". Raha ny tena izy, ny loharano misokatra dia tsy voatery fehezin'ny fahalalahana fototra efatra, loharano misokatra fotsiny izy io, hita maso, izay mamela ny fandalinana azy, fa tsy manova azy, maka tahaka azy na mizara azy indray. Raha ny marina dia mety ho programa amidy ity fa rehefa mividy azy ianao dia mahazo fidirana amin'ny kaody ihany, fa mbola fananan'ny hafa ihany.
Nanitsy zavatra vitsivitsy ianao, saingy mahita lesoka foana aho. Ny loharano misokatra sy ny rindrambaiko maimaim-poana dia mety hitovy amin'ny fampiharana. Miankina amin'ny fahazoan-dàlana ampiasain'izy ireo izany.
Ny "avelao handinika azy, fa aza ovaina, adika na zarao indray"tsy salama. Ny rindrambaiko maimaimpoana dia "loharano misokatra" ary mamela izany rehetra izany (ary koa ny fahazoan-dàlana Apache, BSD, ...). Manana fifanoheran-kevitra toy izany ianao.
Raha ny marina dia namaky aho ary ny distro rehetra dia rindrambaiko maimaim-poana satria mamela anao hanova, hizara ary handinika azy ireo daholo izy ireo, ny tiana holazaina dia hoe maro no manana rindrambaiko manana ho azy manokana hampiasa ny GNU / Linux izay tsy azo ovaina ary any. eo no idiran'ny olana.
Satria, ohatra, i Debian dia manana tahiry tsy misy maimaimpoana, tonga lafatra, fa i Debian kosa manana ny fahalalahana 4 voasarona satria azonao atao ny mamerina mamaky azy manontolo (izany hoe Debian), zarao indray, ovao izy ary ataovy ampahibemaso ny fanovana ... sns, ary tsy distro izany "Maimaimpoana 100%".
Ankoatr'izay, izaho dia iray amin'ireo izay mieritreritra fa tsy voatery ho distro misy rindrambaiko maimaimpoana izany, raha jerena fa rindrambaiko koa ny distro.
Ny kernel Linux dia misy blob binary (loharano mikatona) amin'ny rafitra GNU / Linux saika. Izay manana kernel Linux-libre ihany no azo raisina ho maimaim-poana: http://es.wikipedia.org/wiki/Linux-libre
Tsy mampiasa rafitra maimaim-poana 100% aho ary tsy manao ny ankamaroany koa. Miasa ny GNU / Linux noho ireo mpamorona rindrambaiko maimaimpoana, saingy tsy mahatonga azy io ho rafitra maimaim-poana. Azonao atao ny manova sy mizara indray ny fizarana maro, saingy tsy manafaka azy ireo izany. Misy rindrambaiko tsy maimaimpoana azonao ovaina sy zaraina indray, ilay antsoina hoe rindrambaiko semi-free:
Manoro hevitra anao aho mba hiondrika an'ity lohahevitra ity ary hifantoka amin'ny tombony azo tsapain-tanana amin'ny GNU / Linux.
Zavatra efa noresahiko tamin'ny ankizilahy ao amin'ny tarika izy io, lohahevitra iray izay tena mampikorontana sy malalaka loatra ny mikasika azy toa izany, ambonin'izany rehetra izany. Ka natolotro ho fampidirana tsotra.
Ny ampahany amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny rindrambaiko maimaim-poana sy ny loharano misokatra.
Hamafana loharano misokatra izay mamela fanovana. Ny fitsipiny fahatelo dia milaza fa "tsy maintsy avela ny fizarana indray ny fanovana." Ny tsy itovizany dia ny ampahany amin'ny tsy fivadihan'ny kaody loharanom-pahalalana an'ny mpanoratra, izay ahafahan'ny mpanoratra manapa-kevitra fa ny fanovana rehetra dia zaraina ho patch fotsiny.
Sep izay novakiako, na izany aza tsy famaritana mazava ity, fitsapana piloto izany hijerena izay voalaza, ary manampy zavatra ho an'ilay lahatsoratra halefako ho rafitry ny lahateny aho.
Salama nano, tiako ho fantatra raha tonga ilay lahatsoratra nandefasako anao
Izaho manokana dia nieritreritra foana fa ireo foto-kevitra momba ny fahalalahana ireo dia azo ihodivirana ary na dia, amin'ny tranga maro aza, tsy misy ifandraisany amin'ny fampiasana GNU / Linux. Hiezaka aho hanazava ny tenako: ho an'ny mpampiasa 97% rindrambaiko iray -afaka na tsia- Fitaovana fanaovana zavatra fa tsy faranana irery.
Nilaza tamin'ny teny tsotra; ny mpampianatra dia tsy liana raha vita ny asa Windows 7, macOS X, Ubuntu na rafitra miasa hafa. Tsy miraharaha koa izy ireo raha nitombo tao MS Office, Miasa aho o Birao malalaka. Toy izany koa, mpampiasa -amin'ity tranga ity ny mpianatra- hampiasa fitaovana iray izay manampy azy ireo hamaha filàna azo tsapain-tanana, ary io filàna io dia zava-dehibe kokoa amin'izy ireo noho ny filozofia na toerana misy momba ny rindrambaiko maimaimpoana.
Raha ny marina dia tsy mihatra ireo fahalalahana efatra -amin'ny teny azo ampiharina- Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa: ny fahalalahana hanova programa noho ny fananana kaody dia tsy manome antoka ny fahalalahana amin'izany, satria ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mahalala ny fomba fandaharana ary ny tena tonga dia ny manova ny fanahafana sasany na tombontsoa. Noho izany ny fahalalahanao dia voafetra amin'ny fisafidianana ny rindrambaiko na fitaovana mamaha ny olanao indrindra. Ary ho azy ireo dia tsara izany.
Midika ve izany fa ny soatoavina sy ny fahalalahan'ny GNU? Tsia, tsy tiako izany. Raha ny fahitako azy dia zava-dehibe ny fanaparitahana azy ireo, satria izy ireo no misolo tena antony iray hafa izay zava-dehibe ny fampiasana sy ny fanohanana ny fivelarana rindrambaiko maimaimpoana. Raha ny marina, noho ny rindrambaiko maimaimpoana dia misy ny rafitra miasa toa ny macOS X -ny fotony dia BSD-.
Ny tiako holazaina dia ireo fahalalahana ireo fa tsy, amin'ny filàna, no antony lehibe indrindra hampiroboroboana sy hampiasa rindrambaiko GNU / Linux ary noho izany ny fanitsiana ny canon izay misy ny famaritana ofisialy dia, ho an'ny tranga amin'ny fihaonambeo, zava-dehibe ... fa tsy misy ifandraisany.
Manaiky izany aho, fantatro fa mbola tsy hita izy io ary izao rehefa mamaky ilay lahatsoratra indray aho, dia mbola mila mikasika ny olan'ny tombotsoan'ny GNU / Linux, zavatra manan-danja izay tsy noraharahiko.
Mikasika ny fahalalahana sy ny fahazoana ny kaody dia tadidio fa hetsika iray mifantoka amin'ireo mpahay siansa vaovao sy mafana fo izany, noho izany, raha zava-dehibe io teboka io satria maro ireo mpandahatra fandaharana ary mety manana fahaizana manova ny kaody hifanaraka amin'ny zavatra tiany.
Mikasika ny fahalalahana sy ny fidirana amin'ny kaody Hoy i izay hetsika mifantoka amin'ireo olona vao manomboka amin'ny solosaina sy ireo mpankafy ...
Eny ... zavatra mbola tsy voalazanao teo aloha io. Raha ny marina dia mifototra amin'ity ny fisainako:
Ny hevitr'ity hetsika ity, sa tsy izany; andiana hetsika, dia ny manaitaitra ny mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo samy hafa hijerena tontolo vaovao mihoatra izay fantany sy efa mahazatra azy ireo, hahitantsika fa ao anatin'ny tontolo miha feno hevitra sy fomba fampiharana azy ireo isika.
… Tsy milaza na manasongadina mihitsy ianao fa mpahay siansa amin'ny informatika na mianatra siansa informatika, avy eo tsy tadidiko zavatra izay tsy voatonona mihitsy 🙂
Ny hadisoako dia tsy napetrako, ary raha ny tena izy dia any amin'ny oniversite izay ampianarina ny informatika fa hatao ny dinika ... na izany aza, raha toa ka manasongadina ny zava-misy fa tsy izy rehetra dia afaka (tsy ao amin'ny ny tena dikan'ny famaritana ny stallman) fa ny tiana holazaina dia ny hoe avelany malalaka kokoa noho ny hafa izy ireo.
Ny zavatra tsy tiako hidiranao dia amin'ny antsipiriany be pitsiny satria, ankoatry ny fananana 35 minitra fotsiny hanaovana ny lahateny, indraindray, ny lohahevitra momba ny fahalalahana dia manome lahateny adiny 2 hatao, koa raha afaka izy ireo satria tsy manana na inona na inona tompony ao amin'ny trano fitehirizam-bolany, fa raha ny fahalalahana dia mifototra amin'ny famelana anao hanao izay tianao amin'ny rafitrao, raha ny tena fahalalahana dia ny misafidy ny rafitrao, na dia an-tsokosoko sy toy izany aza, toy izany no hitetezantsika ny ala.
Raha ny marina dia te-hikasika ny sahan'ny fahalalahana ao amin'ny rafitra sy ny tena fahafaha-misafidy ao anaty distro aho, izay ho tonga io teboka avo io hanazava amin'ny tenany ny fototry ny fahalalahan'ny GNU / Linux, na dia mifototra aza ny zava-drehetra amin'ireo fahalalahana fototra 4, rehefa dinihina fa manana ny fidirana amin'ny kaody distro ianao dia azonao atao ny manova azy araka izay itiavanao azy, omeo an'izay tianao izany ary ianaro aminy, tsy "afaka" foana io ary ... isika dia efa mihalava. tadidinao ve ny hevitra? XD hahaha
frankceva dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara. Tena mazava sy ilaina ho an'ireo vao teraka toa ahy. Fiarahabana avy any Guayaquil.
Mamaly an'i frankceva
Lahatsoratra tsara re, arahaba soa, manantena ny lahatsoratra manaraka aho. Manantena aho fa maro
Ho fanampin'ny fampiroboroboana ny famelabelaranao dia manome soso-kevitra anao aho mba hanombohanao minitra fifandraisana vitsivitsy, ary avy eo mivoatra avy eo. Ny tiako holazaina, miaraka amina fanontaniana, toy ny, inona no heverinao fa lozisialy maimaim-poana? Sa inona no azonao amin'ny rindrambaiko maimaimpoana?, Ary rehefa mahazo valiny vitsivitsy ianao dia atombohy ny fampisehoana ataonao; Izay tampoka afaka manampy anao hahalala ny halehiben'ny fahalalana ananan'izy ireo momba an'io lohahevitra io, ary hahafinaritra azy kokoa, na ho an'ny mpijery na ho anao.
Eny, raha ny marina ny fomba fampiharako dia mavitrika sy mahatsikaiky, isaky ny miatrika ireo olana ireo aho dia mampiasa ohatra amin'ny fiainana andavan'andro ary hatreto dia tiako izany ... raha afaka mirakitra farafaharatsiny ny iray amin'ireo famelabelarana hataoko eto 🙂
RudaMale dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara, saingy araka ny efa natoron'izy ireo etsy ambony dia misy lesoka lehibe eo amin'ny famaritana ny loharano misokatra, ny fehezan-teny voalohany amin'ny Definition of Open Source dia milaza zavatra toy izao: "Ny loharano misokatra dia tsy midika fotsiny hoe fidirana amin'ny kaody loharano", izay mety ho "Ny loharano misokatra dia tsy midika hoe fidirana amin'ny kaody loharano fotsiny." Heveriko fa tsy dia misy loatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny lozisialy malalaka sy loharano misokatra, tokony ho hita izay lisansa mihatra amin'izy tsirairay avy .. Ireo «filozofia» roa lehibe, BSD sy lisansa GPL (tsy misy copyleft vs miaraka amin'ny copyleft), dia heverina ho rindrambaiko malalaka sy malalaka. . Mandrosoa ary misaotra anao nanome anao fotoana hahafahana mandray anjara, izany no resahina, arahaba.
Jasmont dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara! Ny famakiana ny vatan'ny lahatsoratra sy ny fanehoan-kevitr'ireo mpandray anjara, ny hevitra tany am-boalohany n @nano dia nisy vokany, farafaharatsiny ho ahy manokana: Manaova fandaharam-potoana tsotra ho an'ny olona vao manomboka sy tsy manam-pahaizana toa ahy. Tokony hiaiky aho fa nifindra tany amin'ny linux noho ny tsy fahampiana ara-teknikan'ny netbook-ko. Nametraka xubuntu 12.04 aho taorian'ny nanandramako ny Ubuntu 10.10 sy 11.04, izay samy be loatra amin'ny vilaniko mahantra. GNU / Linux dia tena tontolo mahaliana izay tsy maintsy katsahinao raha te ho voasarika ianao. Misaotra an'i @Nano tamin'ny fandraisana anjara!
Valiny tamin'i Jasmont
mandresy dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara ho an'ireo very.
Teboka fanombohana hanazavana ny hevitra sns ...
Zavatra tiako hosoratana, saingy kamo foana ...
Te handika an'ity lahatsoratra ity amin'ny bilaogiko aho, mazava ho azy miaraka amin'ny trosa maharitra sy rohy mankany amin'ilay tany am-boalohany ary mitanisa ny loharano, ary mitazona izany fahazoan-dàlana izany ihany, mazava ho azy ...
Mamaly an'i victorhck
Adrian Cid Almaguer dia hoy izy:
Ry namako, heveriko fa tokony hamerenanao ity fehintsoratra ity:
Heveriko fa ny fahalalahana efatra dia tsy mamela anao hivarotra kaody, raha manana izany ianao dia afaka manao izay tianao atao miaraka aminy. araka ireto fahalalahana manaraka ireto:
Valiny tamin'i Adrian Cid Almaguer
Salama amiko, toa fampidiran-dresaka nahagaga izany, na dia manana adihevitra mafy momba ireo fahasamihafana kely manavaka ny zavatra iray amin'ny iray hafa amin'ny fampiharana aza ny «Windóusico», izay olona te handany fotoana fotsiny, na mila mizara mafy zavatra izay hoheverin'izy ireo ho zava-dehibe tokoa.
Matetika ny namana no manontany ahy ny momba an'i Ubuntu ary heveriko fa tena tsara hanombohana ity lahatsoratra ity (fantatro fa tsy Ubuntu ny zava-drehetra ary betsaka kokoa ny Distros)
Na izany na tsy izany dia heveriko fa manaitra ny Blog.
Mamaky tsara tokoa
Linux ho an'ny Dummies.